“ကျွန်တော်ကွီးရွှေ အနီမကြောက်” - Neoxian City
ကျွန်တော်၏ ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ကာ သို့လောသို့လော ဘေးချော်၍ မတွေးကြစေချင်။ အခုချိန်က နိုင်ငံရေးတွေ ဆွဲတွေးနေကြချိန်ဆိုတော့ စာရှုသူ မြန်မာ-ဟိုက်ဗ်အဖွဲ့သားများ ဘေးချော်ကာ အတွေးမမှားစေရန်အတွက် ကြိုတင်ကာ ရှင်းပြထားမှ တော်ကာကျမည်။ ကျွန်တော်ကွီးရွှေ ဆိုလိုသည်က ကျွန်တော်များ၏ Cryptoလောကကြီး၏ ဈေးကွက်၌ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟိုက်အဖွဲ့သားများ သိထားကြသည့်အတိုင်း ယခုရက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်များ ဟိုက်ပလက်ဖောင်းအပါအဝင် Crypto လောကကြီးတစ်ခုလုံး ရဲရဲတောက် နေကြပါ၏။ အချို့သော ကွိုင်တစ်ချို့သာ ဈေးကွက်နေရာရရန် ဝယ်လိုအားမြင့်နေကြသဖြင့် အနည်းငယ် စိမ်းနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ဤကဲ့သို့ အခိုက်အတန့်များသည် Crypto လောကကြီးတွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နောင်တွင်လည်း မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံနေကြရအုန်းမည်သာ။
ထို့သို့ ရဲနေခြင်းကလည်း တနည်းအားဖြင့် “ရာနှုန်းတော်တော်များများ” အလားအလာကောင်းသည်ဟု ပြောရမည်။ စာရှုသူအနေနှင့် ဟယ်ဘယ့်နှယ် ဈေးကျနေပါတယ်ဆိုတာ အလားအလာကောင်းရမယ်လို့ ပြောရက်တယ်ဆိုပီး အပြစ်ဆိုချင် ဆိုပါလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း- ကျွန်တော်ကွီးရွှေ Crypto လောကနှင့် အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးပါ သို့သော် တီးမိခေါက်မိတော့ ရှိပါသည်။ အထက်၌ဆိုခဲ့သော နီရဲဈေးကျနေခြင်းသည် ဈေးကွက်ဝင် နေရာရနေသော Cryptoများအတွက် ပြန်လည်ဈေးတက် ဉီးမော့လာမည်၊ စိမ်းလာမည်ဟု လောကသဘာဝအရ အသေအချာပြောနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ခြွင်းချက်အနေနှင့် အချို့သော ခိုင်မာမှုမရှိ၊ ကျောထောက်နောက်ခံ အားနဲသော Crypto များအတွက်မူကား ကျပီးရင်းကျသွားကာ နောက်ဆုံး၌ လူမသိသူမသိဇာတ်သိမ်းသွားကြမည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အထက်၌ ကျွန်တော်ဆိုခဲ့သောစကားတွင် ရာနှုန်းအတော်များများဟု အထူးထည့်သွင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တဆက်တည်းပြောရလျှင် လောကသဘာဝနိယာမအရ အတက်ရှိလျှင် အကျရှိသည်၊ ထို့အတူ အကျရှိလျှင်လည်း အတက်သည်မလွဲမသွေ ရှိလာမည်သာတည်း။
ဤသို့ဆိုလျှင် ကျွန်တော်ကွီးရွှေ အနီမကြောက်ရခြင်းမှာ ကျွန်တော်များ မြန်မာ-ဟိုက်အဖွဲ့သားများ အားလုံးသိကြပီးဖြစ်သည့် ဟိုက်ဗ်ဘလော့ချိန်း ကွန်မြူနတီကြီးသည် အရှိန်တစ်ခုရနေပြီးဖြစ်၍ ဝုန်းကနဲတက် ဝုန်းကနဲကျ ဖြစ်ခြင်းမျိုးမှ ကင်းဝေးကာ တည်ငြိမ်သော လမ်းပေါ်သို့ တရွေ့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အပြင် သေချာသော အနာဂါတ်ကို မြင်နေရသည့်အတွက် ကျွန်တော်ကွီးရွှေ လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော အနီစပ်ကြားကာလကို မကြောက်ပါကြောင်းနှင့် ဤသို့သောအချိန်များတွင် ဖြည်းဖြည်းနှင့်ပုံမှန် ပိုစ်များတင်ကာ မိမိတို့ ဘလော့စာမျက်နှာများတွင် ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့် ဆက်လက်၍ လျောက်လှမ်းကြရန် ကျွန်တော်ကွီးရွှေမှ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။ မကြာသောအချိန်တွင် ဈေးကွက်ကြီး မီးစိမ်းလာတော့မည်ဟု ပြောကြားရင်း --
hive-122133 cryptocurrency blog proofofbrain archon trafficincider neoxian creativecoin literature
ဒါပေါ့ဗျာ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် တိုးတက်မှု ရယူပါ။ !PIZZA
@nweoomon! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @nyinyiwin.
ဟုတ်ပါတယ် Hive platform အတွက်ကတော့ စျေးနှုန်း ထိန်းပေးမဲ့ HBD ကလည်း ရှိတော့ ပိုတောင် ကြောက်စရာမရှိပါ။ သဘာဝအရ စျေးတက်တော့လည်း ပျော်နေရတာပေါ့လေ။ !PIZZA
@nyinyiwin! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @uthantzin.
တက်လိုက်ကျလိုက် သဘာဝဆိုတာသိထားရင် ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးလေ။ တနေ့ကျ အကျိုးခံစားရမှာပါဗျာ။
ရုပ်ရုပ်မလုပ်နဲ့နော်၊ အခုခေတစားနေတဲ့ ဒလန်လို့အပြောခံနေရအုံးမယ် 😂😂😂
အမယ်လေး ဒလန်တော့ မဖြစ်ပရစေနဲ့ 😁😁😁 !PIZZA
@yuzana! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @nyinyiwin.
@nyinyiwin! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @htwegyi.
ဟုတယ် ဟုတယ် 😊😊😁 !PIZZA
@htwegyi! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @nyinyiwin.